Ramarosaona Franck – Iles Eparses: « Aiza ilay volabe 300 tapitrisa dolara ? » | NewsMada
Ramarosaona Franck – Iles Eparses: « Aiza ilay volabe 300 tapitrisa dolara ? »
Nitondra ny heviny manoloana ny raharaham-pirenena ny mpanolotsaina momba ny serasera sy ny politika eo anivon’ny primatiora, Ramarosaona Franck. Na tsy eto an-toerana aza ny tenany, manaraka akaiky ny toe-draharaha amin’ny maha mpamakafaka politika azy koa. Anisan’ny noresahiny ny momba ireo Nosy manodidina (Iles Eparses). Eo koa ny fiatrehana ny fifidianana…
Tsy afaka ny hangina manoloana ny raharaha sasany tsy mazava. « Tokony hametraka ho ambony ny fiandrianam-pirenena ny tena tia tandrazana… Raha ny fantatra, nisy fifanarahana miafina nataon’ny fitondrana teo aloha, niaraka amin’ny Amerikanina, momba ny harena ao amin’ny Iles Eparses. Niaraka amin’ny orinasa iray izany ary tsy nisy tolobidy akory. Nisy resaka volabe hatrany amin’ny 300 tapitrisa dolara tamin’izany nefa tsy hita”, hoy izy. Nanteriny fa ifarombahan’ny Anglisy sy ny Rosianina io resaka Nosy manodidina io. Tsy vitan’izany anefa fa takin’ny FMI ny momba io volabe io satria anisan’ny nampiatoana ny vola tokony ho an’ny Fec izany, araka ny nambarany.
Minisitra lasa ambasadaoro sy fanesorana tompon’andraikitra
Mifandray amin’ny tranga samihafa ny momba izany rehetra izany ka nahatonga azy nametra-panontaniana raha mety misy hifandraisany amin’ny nandefasana ny minisitra teo aloha ny Solika, i Zafilahy Ying Vah, ho ambasadaorontsika any Rosia izany. Eo koa ny nanesorana amin’ny toerany ny tompon’andraikitra eo anivon’ny filankevi-pitantanan’ny Omnis. “Misy inona marina eo amin’ny sehatry ny solika fa mivoaka avokoa ny resaka any ivelany any sy ny tsiambaratelony ? Anisan’ny ho adihevitra sy ho resabe ao anatin’ny fifidianana ny momba ireo rehetra ireo”, hoy ity talen’ny famoahana ny gazety Ultima Media ity.
Ankoatra izany, ny tokony hanajanonana ny fifanarahana eo amin’ny Ethiopian Airlines sy ny Air Madagascar nefa manao fiaraha-miasa amin’ny Air Australe. “Tafiditra ao anatin’izany ny minisitra Rabary Njaka Henri sy ny eo anivon’ny ACM… Vato misakana ny fifanarahana amin’ny FMI avokoa izany”, hoy Ramarosaona Franck.
Hikarakara sy hanomana fifidianana ny governemanta
Etsy andaniny, nitondrany fanazavana koa ny andraikitra sy ny asan’ny governemantan’ny Priaminisitra Ntsay Christian. Nanteriny fa hikarakara sy hisahana ny fifidianana miaraka amin’ny Ceni io fitondrana io. Hisahana ny fampandehanan-draharaha ary hanara-maso ireo fifanarahana fiaraha-miasa tokony ho vita amin’ity taona ity. Nanafatrafatra ireo kandidà sy ny mpomba azy anefa ity mpanolotsaina politika sy ny seraseran’ny primatiora ity. “Aoka tsy ho tonga any amin’ny herisetra sy fifampihantsiana isika. Miandrandra anareo kandidà ny vahoaka ka anjaranareo ny mampahafantatra ny vina sy mandresy lahatra azy”, hoy izy.
Tsy fiandaniana na fitongilanana
Notsiahiviny koa ny tsy tokony hiandanian’ny mpiasam-panjakana ambony na hitongilanany ary ny tsy fahazoan’izy ireo manao propagandy. Anisan’izany, ny lehiben’ny faritra, ny prefet sy ny eny anivon’ny distrika ary koa ny minisitra. Tahaka izany koa ireo mpitsara sy ny miaramila… miantoka ny fametrahana filaminana sy ny fandriampahalemana. “Ho maodely aty Afrika eo amin’ny fifidianana isika raha tafavoaka io ary ho voninahitry ny firenena sy ny vahoaka malagasy izany”, hoy ihany ity tompon’andraikitra eo anivon’ny Primatiora ity.